रुसी वैज्ञानिकले क्यान्सरको उपचार गर्न सक्ने फल पत्ता लगाए, जुन फल नेपालमा मात्रै पाइन्छ ! - IAUA
रुसी वैज्ञानिकले क्यान्सरको उपचार गर्न सक्ने फल पत्ता लगाए, जुन फल नेपालमा मात्रै पाइन्छ !
ramkrishna October 24, 2017	जुन फल नेपालमा मात्रै पाइन्छ !रुसी वैज्ञानिकले क्यान्सरको उपचार गर्न सक्ने फल पत्ता लगाए
संसारका करोडौं मानिसहरु क्यान्सरबाट पीडित छन् । क्यान्सर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा घातक रोग हो । तर रुसी वैज्ञानिक ह्रिस्टो मेर्मेर्सकीले क्यान्सरको प्राकृतिक उपचार पत्ता लगाएको दावी गरेका छन् । रुसका वैज्ञानिक ह्रिस्टोले घरमै बनाउन सकिने यस्तो औषधी पत्ता लगाएका छन्, जसको प्रयोगले विभिन्न प्रकारका प्राणघातक क्यान्सर रोगबाट बचाउन सन्छ ।
काँचको भाँडामा केही गेडागुडी राख्नुहोस् र डुब्नेगरी पानी राख्नुहोस् । यसलाई एक रात यत्तिकै छाडिदिनुहोस् र अर्को बिहान गेडागुडीबाट पानी निकाल्नुहोस् र त्यसलाई राम्रोसँग पखाल्नुहोस् ।
उक्त सफा गेडागुडीलाई काँचको भाँडामा छोपेर २४ घन्टासम्म राख्नुहोस् । यसपछि टुसाएको गेडागुडी वा क्वाँटी तयार हुन्छ ।
हेल्थीटिप्सवर्ल्ड्स नेटका अनुसार डा. मेर्मेर्सकीका अनुसार यो औषधी दीर्घायू र स्वस्थ जीवनको लागि पनि सहयोगी हुनेछ । यो क्यान्सरको उपचारमा एकदमै लाभदायक हुनेछ ।
जवान देखिन र तागतका लागि पनि यो उपयोगी हुनेछ । यसले शरीरको मेटाबोलिज्म बढाउँछ र मृगौला र कलेजो सफा राख्न पनि यसले सहयोग गर्दछ । यसले शरीरमा रोगको विरुद्ध लड्ने क्षमता पनि बचाउँछ ।
Previous Previous post: ५० लाख तिरेर यो माछा किन्न तयार थिए मानिसहरु, यस्तो छ कारण